Ma waxaad ka daaleen nidaamka diiwaan gelinta in tallaabooyin dhowr ah si ay u sameysato akoon cusub on goobta of bookmaker a?
1xBet, dalabyo Paris lagu kalsoon yahay, xalka: diiwaangelinta internetka ee wakaaladda waa mid aad u fudud, maxaa yeelay waxa ay si degdeg ah ma u baahan tahay:
galaan macluumaadka joogitaanka;
ayaa tilmaamaya tirada phone isku mid ah iyo cinwaanka email!
The wadataa ee ciyaaryahanka ayaa lagu tilmaamay ee ay digtoonaan koontada shakhsiga ah ka dib markii account abuurka.
Waxa intaa dheer in faa'iidooyinka cad, 1xBet bookmaker ka dhigan tahay tiro balaadhan oo ah Paris sports fursado wanaagsan oo casino online Paris on sports dalwaddii oo taxane caan, mishiinada iyo lotteries la gunooyinka iyo Australia.
Siyaabaha la galaan 1xBet
shirkadda this 4 Options in ay diiwaan on goobta 1xBet:
1) 1qoraalana in xBet 1 click
Qaabka ugu dhakhsaha badan waa in ay iska diiwaan hal click. Ka dib markii muujinaysa dalkaaga iyo lacagta, waxaad badbaadin kartaa dhammaan xogta entries.
SPORTPARI code isticmaalka promo si aad u hesho gunno ah 100% aad kor ugu horeysay deposit 50 000 CFA.
2) phone dambe
In ay ku xidhmaan account 1xBet, Waa in aad soo gashid xisaabtaada tirada mobile la xidhiidha, ee sirta ah iyo saxaafadda "Connect" button. Haddii aad doonayso inaad, waxaad badbaadin kartaa xogta.
Waxaad heli kartaa account email aad. Waxaa waajib ah in email waxa uu la xidhiidhaa xisaab. foomka diiwaangelinta Tani waa ugu dhamaystiran. halkan, waa inaad buuxisaa:
Gobolka aad deggan tahay
magaca oo buuxa
kuuban Code (SPORT PARI)
Fiiro gaar ah waa in aad soo gashid oo kaliya xogta saxda ah, haddii kale nidaamka aqoonsiga account aan la samayn karaa.
Ka dib markii la tilmaamayo tirada telefoonka gacanta, waa in aad riix badhanka "Save". sharadka SMS ku qeexan nalalka tirada. fariin waa in la soo galay uu furmo suuqa u dhiganta ee foomka diiwaangelinta si loo xaqiijiyo link ah.
Tallaabada xigta waa in ay xaqiijiso aqbalo oo ka mid ah qodobada heshiiska la user iyo buuxiso nidaamka diiwaan gelinta.
4) Waayo, shabakadaha bulshada iyo fariimaha deg dega ah
Waxaad xiri kara adiga kuu gaar ah 1xBet xirka bulshada ee la xidhiidha deg deg ah. Waa in aanad gelin data: Google+, Mail.ru, telegraam, iwm. Marka xiran, waa in aad guji icon ee shabakadda lala. si ay u diiwaan, sheeg network la doonayo, code dhiirrigelin SPORTPARI iyo lacagta.
Waa in la ogaadaa in codsiga nidaamka inuu soo galo lambarada ama xarfaha (image ee 1xbet xeerka) si loo xaqiijiyo inaad tahay aadanaha.
Aqoonso goobta ma jiraan sababtoo ah ee ka shaqeeya bookmaker 1xBet shati ee Curacao iyo aqbala ciyaartoyda adduunka oo dhan.
Sidaa darteed, su'aasha ku saabsan sida loo qaataan aqoonsi 1xBet baaba'aa keligeed, laakiin in macnaheedu ma aha in nidaamka noocan oo kale ah kama muuqan goobta.
Ka dib markii diiwaan gelinta, Waa in aad buuxi meelaha banaan oo dhan in aad xisaabta shakhsiyeed.
bookmaker laga yaabaa in aad u soo dirto photos of aqoonsiga si aad u baxdo lacag. waa in aan ka cabsan waxaa ka mid ah in aad, sababtoo ah waa hab caadi ah oo lacag ku saabsanaa geedi socodka xisaabta.
adeegga ammaanka ayaa waxa uu xaq u weydiiya inaad soo dirto bogga sawir baasaboor iyo macluumaad kale oo shakhsi ah.
Ha welwelin ku saabsan asturnaanta macluumaadka, wax walba waa ay gacanta ku fadhigii Curacao. jeeg wuxuu qaadanayaa ilaa toddobaadkii, laakiin waxaa mar walba jira xaalado gaar ah.
Fiiro gaar ah in aad ka noqon karin lacag habka lacag bixinta loo isticmaalo marka goyn.
Deposit iyo gunno 1xBet
In 1xBet bookmaker ah, xidhiidhka ka lagu sameeyey lambarka aqoonsiga ah loo qoondeeyey by nidaamka ciyaaryahanka cusub ka dib markii la abuurayo xisaabta. Waxaad isticmaali kartaa cinwaanka e-mail ku diiwaan gashan. In marka hore iyo in kiiska labaad, waa in aad qortaa erayga sirta ah. Waxaa aad u fiican in aan la badbaadin sirta iyo magaca user ee goobaha browser si aan ninna u isticmaali karaan iyo helitaanka xisaabtaada.
Marka si guul qortey goobta iyaga wata cinwaan cusub, waa in aad dhowr miridh account ciyaarta. In deposit ugu horeysay, ciyaaryahanka si toos ah u helo gunno 100% badalka Lacagta. Waayo, sharad aad leedahay si aad bet wadne-. koror ee xisaabaha ee lacagta ugu yaraan saddex jeer, aad lacag ka deebaajiga noqon kartid.
Friday, kor u qaadida "Lucky Friday" waa ansax: account cusub ee ciyaaryahan 100 Euro waa keddibna. Iyo dib-Wednesday keeni doontaa gunno kale iyo laab lacagtii!
dheeraad ah, ciyaartoyda Registered fursad u leeyihiin in ay isticmaalaan badan dalabyo dhiirrigelin iyo codes loo iibiyay si aad u hesho kulan lacag la'aan ah iyo Paris, iyo awood u leh inuu ka soo kabsado qaar ka mid ah lacagtaas qaatay Barnaamijka Cashback VIP.
Waxaan rajaynaynaa in this article waxtar leh u noqon doonaa, waxaana ay fahmaan sida ay u qoraan in 1xBet.